कसरी तपाईंको वेबसाइटको लागि गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने रणनीतिहरूसँग काम गर्ने?
सबै वेबसाइट मालिकहरू जुन आफ्नो रैंकिंग सुधार गर्न चाहन्छन् आफ्नो वेबसाइटहरूको लागि ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू खोज्दैछन्. आगमन लिङ्क तपाईंको वेबसाइट रैंकिङका लागि महत्त्वपूर्ण कारकहरू छन् र तपाईंको ब्रान्ड प्राधिकरणको लागि मतदान गर्दछ. लिङ्क इमारतले अन्य आला सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा नयाँ इनबाउन्ड लिङ्कहरू सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो जुन ब्रान्ड प्राधिकरण बढाउन र लिङ्क गरिएको स्रोतमा थप ट्राफिकलाई आकर्षित गर्नका लागि।. लिंक इजाजतपत्र प्रक्रिया अफ-पृष्ठ अप्टिमाइजेसनलाई बुझाउँछ र वेबसाइट संरचना र उपयोगिता सुधार पछि, गुणस्तर सामग्री शिल्प बनाउने, र प्रयोगकर्ता-अनुकूल डिजाइन सिर्जना गर्नु पर्दछ।. जब सबै पृष्ठ-पेज अप्टिमाइजेसन प्रक्रियाहरू सम्पन्न हुन्छन्, यो समय भन्दा ठूलो दर्शकका लागि तपाईंको साइट देखाउने समय हो. लिङ्क इमारतले मुखको वचनसँग धेरै समान छ, जुन इनबाउंड मार्केटिङ रणनीतिसँग मेल खान्छ.
सबै ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्न असम्भव छ. त्यसोभए, किनकि तपाईलाई केहि सामान्य ब्याकलिङ्क गुणस्तर कारकहरू समावेश गर्न आवश्यक छ जुन यसमा समावेश छ:
इनबाउंड लिङ्क शक्तिशाली हुन्छन् जब तिनीहरू उद्योग सम्बन्धी वेब स्रोतहरूबाट आउँछन्।.
तपाईंको लंगर पाठ प्राकृतिक देखिन सक्छ र सामग्री विषय र तपाईंको लक्षित कीवर्डसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ.
तपाईंको ब्याकलिङ्क वरिपरि पाठ अधिकतम रूपमा प्रासंगिक र उपयोगी हुनुपर्छ. प्रयोगकर्ताहरूलाई यसलाई विज्ञापनको रूपमा आकर्षित गर्न हुँदैन.
तपाइँको लिंकमा रहेको पृष्ठमा इनबाउंड लिङ्कहरूको संख्या.
लिङ्क पृष्ठ प्राधिकरण र प्रतिष्ठा.
लिङ्किंग वेबसाइट PageRank.
यसबाहेक, तपाइँलाई तपाइँको साइटमा लिङ्कहरू निर्माण गर्दा निम्न कारकहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ।29)
तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू धेरै डोमेनहरूमा Google लाई देखाउनको लागि बनाइनु पर्छ कि तपाईंको सामग्री विभिन्न व्यक्तिहरूको संख्याले प्रशंसा गरेको छ।. यसबाहेक, विभिन्न डोमेनहरूमा लिङ्कहरू सिर्जना गरेर, तपाइँ आफ्नो लिङ्क प्रोफाइल सुधार गर्दछ र यसलाई अधिक कार्बनिक बनाउनुहोस्.
Dofollow र nofollow लिङ्कहरू बीचको शेष (2 9)
निस्सन्देह, अधिकांश वेबमास्टरहरूको प्राथमिक लिङ्क निर्माण उद्देश्य भनेको ब्याकलिङ्कहरू लिङ्क गरिएका स्रोतहरूमा लिङ्कको जुस. तथापि, एक स्वस्थ र प्राकृतिक हेर्ने ब्याकलिंक प्रोफाईल सिर्जना गर्न, तपाइँलाई dofollow र बाह्य लिङ्कहरू नलगाउने उत्पन्न गर्न आवश्यक छ.
एंकर ग्रंथ (2 9)
तपाईंलाई प्रत्येक इनबाउन्ड लिङ्कको लागि विभिन्न एंकर पाठहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ।. यसबाहेक, तपाईंको लंगर पाठहरू तपाईंको ब्रान्ड नाम वा लक्षित कीवर्डको रूपमा नदेखिनै पर्छ. ध्यान राख्नुहोस् कि उही एंकर ग्रंथहरूले प्राय: तपाइँको प्रतिष्ठालाई गाह्रो पार्नेछन् र Google दण्डको कारण पाउनेछन्.
2012 मा ठूलो गुगल अपडेट गर्नु भन्दा पहिले, सबै वेबमास्टर्सले उनीहरूको गुण भन्दा सट्टा लिङ्कहरूको संख्यामा एक उच्चारण गरे. तथापि, Google पेंगुइन अद्यावधिक खेल्न आउँदा, सबै पुरानो कालो-टोपी एसईओ लिंक निर्माण रणनीतिहरू प्रभावकारी भएन.
त्यसोभए, हामी कसरी एक जैविक रास्ते मा तपाईंको वेबसाइट को लागि बैकलिंक प्राप्त गर्न को बारे मा चर्चा गरौं:
सम्पादकीय लिंक (2 9)
केवल आला सम्बन्धित उच्च पीआर साइटहरु संग सम्पर्क गरेर सम्पादकीय लिङ्क प्राप्त गर्न सक्छन् र उनीहरूको लिङ्क निर्माण सम्भावनाहरु संग चर्चा गर्नुहोस्. तथापि, तपाईंलाई तयार हुनु आवश्यक छ कि तपाईं धेरै वेबसाइट मालिकों सम्म पुग्न सक्नुहुनेछ र नतीजा उनको द्वारा अनदेखा गरिरहेको छ वा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नु पर्छ. तपाईं सेल्टल वेब विश्लेषक वा उत्कृष्ट प्रयोग को आला सम्बन्धित साइटहरु को अधिकार को जांच गर्न सक्छन् Source .